Onitsha tanker fire: Ndị ọkụ lara ihe ha n'iyi na-ekwu etu ọ dị ha - BBC News Ìgbò
Onitsha tanker fire: Lee ụfọdụ ndị ọkụ kpụrụ isi ma kpụọ afụọnụ ha
24 Oct 2019 17:3024 Oct 2019 17:30
Mmemme sonyere ọkụ tanka gbara n'Onitsha
Obi nke Ọnịcha etiela ndị ọkụ a metụtara aka n'obi
Otu nwoke ọkụ gbara ụlọahịa ya n'Ọchanja, ọkụ Ọmọba napụkwara ya ụlọ na ụgbọala ya
Ọkụ gbara ihe ruru ụgbọala 22 ọkụ n'Ọmọba dị n'Ọnịcha
Nke Chimamaka Ihenacho, Chigozie Ohaka, Ikechukwu Kalu, Chukwunaeme Obiejesi na Adline Okere
Ebisara na 14:53 19 Ọktọba 201914:53 19 Ọktọba 2019
Ọtụtụ ụlọ gbara ọkụ na-adaruzi ala ugbua n'Ọchanja
A na-asị na ala adịghị mma bụ uru ndị eze!
Ngwa lee ka ndị na-ego igwe "Condemned Iron" si na-egokọsị igwe gbara ọkụ n'ụlọahịa ndị mmadụ.Image caption: Ngwa lee ka ndị na-ego igwe "Condemned Iron" si na-egokọsị igwe gbara ọkụ n'ụlọahịa ndị mmadụ.
Igwe e ji rụọ ụlọ rere ọkụ n'ahịa ỌchanjaImage caption: Igwe e ji rụọ ụlọ rere ọkụ n'ahịa Ọchanja
Ebisara na 14:00 19 Ọktọba 201914:00 19 Ọktọba 2019
Lee ụfọdụ n'ime ndị ọkụ ọgbụgba kpụrụ isi ma kpụọ afụ ọnụ ha
Oriakụ Chidimma Mezue: Ụlọobibi ya na ụlọahịa ya gbara ọkụ n'Ọchanja. Ka ọ dị ugbua ya na di ya enweghizị ebe ha na-arahụ nke ha ji enwe akwa ọbụla.Image caption: Oriakụ Chidimma Mezue: Ụlọobibi ya na ụlọahịa ya gbara ọkụ n'Ọchanja. Ka ọ dị ugbua ya na di ya enweghizị ebe ha na-arahụ nke ha ji enwe akwa ọbụla.
Essy Moghalu onye Ụga, na-akwa akwa arịrị na ụlọahịa nne ya gbara ọkụ n'Ochanja.Image caption: Essy Moghalu onye Ụga, na-akwa akwa arịrị na ụlọahịa nne ya gbara ọkụ n'Ochanja.
Essy na-ekele Chukwu na ya na nne ya nwere ike gbapụ ọsọ oge ọkụ ahụ na-akpa ike ụbọchị Wenezde ahụ.
O kwuru na ọ bụ n'otu ebe ahụ ka nna ya sị azụ ha n'ụlọakwụkwọ ma nyekwa ha nri.
Hillary Aliozor: Ọkụ gbara ụlọahịa ya ma gbakwaa ebe ọ na-akwasa ngwaahịa ya.Image caption: Hillary Aliozor: Ọkụ gbara ụlọahịa ya ma gbakwaa ebe ọ na-akwasa ngwaahịa ya.
Ebisara na 13:00 19 Ọktọba 201913:00 19 Ọktọba 2019
Onitsha Tanker Fire: Onitsha kwesịrị inwe ezigbo ndị ọrụ mmenyụ ọkụ - Obi Onitsha
Obi Ọnịcha bụ Nnaemeka Achebe ekwuola na obi ya tiwara maka ihe ọkụ tanka a mere n'Ọnicha.
Ọ bụ n'akwụkwọ ozi o depụtara ka o tiri ndị ọkụ a metutara aka n'obi ma kelee onyeisiala bụ Muhammadu Buhari, Gọvanọ Willie Obiano na ndị Eze odinala zitere ha ozi iti aka n'obi.
O kwukwara na ọ na-echeta nke mere na Mee afọ 2015 ebe tanka bụ mmanụ ụgbọala dakwara ma gbuo ihe ruru mmadụ iri isii.
Obi Ọnịcha kwuru na mgbe ọ na ezi ozi Ofala ka o kwuru maka etu Anambra steeti si di.
Obi Ọnịcha rụtụrụ aka etu izu ahia n'okporoụzo sị dị njọ ma etu unyi si agbaso Ọnịcha aka mgba.Image caption: Obi Ọnịcha rụtụrụ aka etu izu ahia n'okporoụzo sị dị njọ ma etu unyi si agbaso Ọnịcha aka mgba.
O kwuru maka etu azumahia na mmepe obodo si bụru ọdachi nye Ọnịcha.
Ekele ya rukwara Gọvanọ Willie Obiano maka etu o siri gbatara ndị Ọnịcha ọsọ enyemaka.
Kama o kwuru, kwusie ike na ezigbo ndị ọrụ mmenyụ ọkụ dị ezigbo mkpa n'obodo mepere emepe dịka Ọnịcha.
Ebisara na 12:55 19 Ọktọba 201912:55 19 Ọktọba 2019
Lee ihe ọkụ mere ihe ndị mmadụ n'Ọmọba dị n'Ọnịcha
Ọkụ ọgbụgba n'Omagba: Mmadụ anwụghị mana ụzụ akwa na-atụ n'ihi na ụlọ na Ụgbọala agbaachaala ọkụ.
Ọkụ mere ndị mmadụ ịwa!
Nwoke ụgbọala ya rere ọkụImage caption: Nwoke ụgbọala ya rere ọkụ
Ụlọ rere ọkụ n'ỌmọbaImage caption: Ụlọ rere ọkụ n'Ọmọba
Ọkụ bara ebe a na-edozi ụgbọala gaa repịa ụgbọala ndị nọ ebe ahụImage caption: Ọkụ bara ebe a na-edozi ụgbọala gaa repịa ụgbọala ndị nọ ebe ahụ
Ọkụ a metụtara ma ụlọ ma ụgbọalaImage caption: Ọkụ a metụtara ma ụlọ ma ụgbọala
Ebisara na 12:47 18 Ọktọba 201912:47 18 Ọktọba 2019
Ọkụ Ọchanja napụrụ otu nwoke ụlọahịa ya nke Ọmaba na-apụ ya ụlọobibi
Nwoke a nwere ụlọahịa n'Ọchanja ma nwee ụlọobibi ya n'Ọmaba
Akụkọ na-eru anyị site n'Ọmaba na-ekwu na ọkụ gbara n'Ọchanja gbara ụlọọahịa otu nwoke ebe nke gbara na n"ọmaba gbara ụlọobibi ya.
Ọ bụ ndị agbataobi nwoke a gwara BBC Igbo ụdịrị ọdachi a metụtara nwoke a.
Nweke Nnamdi KingsleyCopyright: Nweke Nnamdi Kingsley
Ụlọobibi ọkụ gbara n'ỌmabaImage caption: Ụlọobibi ọkụ gbara n'Ọmaba
Ebisara na 12:34 18 Ọktọba 201912:34 18 Ọktọba 2019
Anyị emepeela ọbaego maka ndị ọkụ metụtara - Gọọmentị Anambra
Ha kpọrọ aha ọbaego 'Anambra State Victims Support Account'.
Gọọmentị Anambra steeti sị na ha emepela ọbaego maka iji nyere ndị ọkụ ọgbụgba a metụtara.
Ha rịọrọ ndị enyi, ndị agbataobi ka ha nyere ndị a aka etu ha nwereike.
N'otu aka ahụ gọvanọ Obiano etinyela atụmatụ inye ndị ọrụ mgbanyụọkụ ikike ịkwụrụ nke onwe ha.
Nke a ga-enwe isi ma ọ bụrụ na ndị ụlọomeiwu Anambra Steeti tinyeaka n'ime atụmatụ a.
Ikike a ga-eme ka ndị ọrụ mgbanyụọkụ hazie ego ọbụla batara ha aka na-abụghị gọọmentị itinye aka na ya.
Anambra PoliceCopyright: Anambra Police
Mgbe gọvanọ Willie Obiano gara ebe ọkụ gbara na Upper IwekaImage caption: Mgbe gọvanọ Willie Obiano gara ebe ọkụ gbara na Upper Iweka
Ebisara na 11:54 18 Ọktọba 201911:54 18 Ọktọba 2019
BBC Igbo gara Ọmaba igosi etu o si mee
Ebisara na 11:03 18 Ọktọba 201911:03 18 Ọktọba 2019
Anya hụrụ ka ọkụ Ọmaba Ọnịcha si gbaa
Onye aha ya na Twitter bụ Mr Styles gosiri ihe onyonyo etu o si mee
Ebisara na 10:33 18 Ọktọba 201910:33 18 Ọktọba 2019
Maap ebe ndị ọkụ gbara n'Anambra
Tanka abụọ gbara ọkụ n'Ọchanja na Ọmaba n'ime ụbọchị abụọ
Maap ebe ndị Tanka gbara ọkụ n'Ọnịcha Anambra SteetiImage caption: Maap ebe ndị Tanka gbara ọkụ n'Ọnịcha Anambra Steeti
Ebisara na 10:21 18 Ọktọba 201910:21 18 Ọktọba 2019
Ụgbọala 22 gbara ọkụ n'Ọmaba
Ọkụ a metụtara ụlọ asatọ n'abụghị ndị nke Upper Iweka na Ọchanja
Ọnụ na-ekwuru ndị uwojii n'Anambra steeti bụ Haruna Mohammed sị na ọ bụ ụgbọala iri abụọ na abụọ ka ọkụ gbapịara n'ụlọ a na-arụ ụgbọala dị n'ime ụzọ Udi street Ọmaba.
O kwuru na ọ bụ ụlọ asatọ ka ọkụ a metụtara.
Ndị na-ekiri ụlọọrụ ụgbọala ọkụImage caption: Ndị na-ekiri ụlọọrụ ụgbọala ọkụ
Ebisara na 9:31 18 Ọktọba 20199:31 18 Ọktọba 2019
Tanka ọzọ agbala ọkụ n'Ọmaba, Ọnịcha.
Ndị uweojii sị na o nweghị onye nwụrụ
Dịka a na-ekwu nke mere eme, ụgbọala Tanka ọzọ dara ma gbaa ọkụ n'okporoụzọ Ọmaba Phase 1 nke Ọnịcha na mgbede ụnyaahụ.
Mana ndị uweojii site n'ọnụ onye na-ekwuru ha bụ Haruna Mohammed sị na o nweghi onye nwụrụ n'ọkụ a gbara. Mohammed kwuru na ha ebupụla ụgbọala Tanka a n'ụzọ ka ọ ghara ibute kpachi kpachi okporoụzọ.
Nweke Kingsley NnamdiCopyright: Nweke Kingsley Nnamdi
Ebisara na 9:21 18 Ọktọba 20199:21 18 Ọktọba 2019
E kwesịrị ịchụ onyeisi ndị mmenbyụ ọkụ na mberede
Gịnị na-afịọ BBC Igbo taa chakere anya n'ihe gbasara tanka dara n'Ọnịcha.
Ụtụtụ ọma nu! Anyị amalitela n'ụtụtụ a ọzọ inye unu ọkpụrụkpụ ihe na-ame taa n'Ọnịcha
Ndị gọọmenti ekwupụtabeghi ndị ihe mberede a metụtara
Ndị gọọmenti ekeupụtabeghi mmadụ ole mberede mere n'Ọnịcha.
Ebisara na 18:02 17 Ọktọba 201918:02 17 Ọktọba 2019
Lee ihe ndị ọkụ a metụtara nwere ikwu
Iwe na ọnụma jupụtara ndị Ọnịcha obi, ọ kachasị ndị ọkụ a gbara ụlọ ma ụlọahịa ha.
Video caption: Ndị ọkụ gbara ụlọ na ọdọahịa ha n'ỌnịchaNdị ọkụ gbara ụlọ na ọdọahịa ha n'Ọnịcha
Tanka nsi nyere aka menyụọ ọkụ
Ụlọahịa ebe ọkụ ka na-ere n'Ọnitsha
Ebisara na 14:47 17 Ọktọba 201914:47 17 Ọktọba 2019
Ụfọdụ ụlọahịa ndị mmadụ ka na-enwu ọkụ
Ụfọdụ ụlọahịa ndị mmadụ ka na-enwu ọkụ ugbua.
Ebisara na 14:06 17 Ọktọba 201914:06 17 Ọktọba 2019
Chi ewerela ehihie jie
Mkpu akwa na-ada n'elu n'ala.
Ọtụtụ ngwaahịa ndị mmadụ lara n'iyi n'ọkụ ahụ.
Ọtụtụ ndị nwụkwara na ya, dịka onye ntaakụkọ anyị nọ n'Ọnịcha ugbua si kwuo.
Ọkụ gbara n'OnichaImage caption: Ọkụ gbara n'Onicha
Ebisara na 13:01 17 Ọktọba 201913:01 17 Ọktọba 2019
Okporoụzọ Upper Iweka ebe ndị mmadụ ka na-akwa arịrị
Ọkụ gbara n'ỌnịchaImage caption: Ọkụ gbara n'Ọnịcha
Ebisara na 12:01 17 Ọktọba 201912:01 17 Ọktọba 2019
Lee ka o si aga n'Ọnịcha ugbua
Ebisara na 12:00 17 Ọktọba 201912:00 17 Ọktọba 2019
Gọvanọ Obiano eruola ebe ọkụ tanka gbara n'Onịcha
Gọvanọ Obiano agala ebe ahụ ọkụ gbara n’Upper Iweka, Onịcha.
Nnọọ nu, anyị na-ewetere unu etu ihe sị aga ebe ọkụ gbara n'Ọnịcha ụnyaahụ.Lee foto tanka ka o siri gbaa n'Ọnicha ụnyaahụ
Ọ gwara ndị ihe ahụ metutara okwu nkasị obi.
Ọ sịrị ha ndo maka ihe ọjọọ ahụ mere ha.
Ọ rịọkwara ndị mmadụ ka ha nyere ibe ha aka n’oge dị otu a.
Ọ rịọkwara ha ka ha ghara ịkpa aghara ma ruwe isi n’iwu obodo.
Ọ kwekwara nkwa na gọọmentị ga-eti ndị ya bụ ihe metutere aka n’obi tupu agbaa ekeresimesi.
Ọ kasiri ha obi na ha ga-agba ekeresimesi a n’ọṅụ.
Ọ sị na ndị kọmitii ga-abịa ebe ahụ echi ịmata ndị ya bụ ihe metutere.
Sị ha nyere ha aka.
Obiano kwekwara nkwa na gọọmentị ga-elebara ọrụ mmgbanyụ okụ Steeti ahụ anya ma nye ha akụrụngwa ga-enyere ha aka ịrụ ọrụ ha.
Ọ kwuru na “anyị ga-ajụ ma gbochie ndị ọkanogori chọrọ iji ohere a zuo ihe ndị mmadụ”.
Ọ rịọsiri ha ike ka ha ghara ịda mba.